Soomaaliya oo ka gudubtay dib u eegista qeybta koowaad Barnaamijka SMP – GEELLE MAG
Hay’adda lacagta Adduunka ee IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka gudubtay dib u eegista qeybta koowaad ee wajiga afaraad ee Barnaamijka SMP ee la socodka Shaqaalaha, kaasoo qeyb ka ah barnaamijka deynta looga Cafinayo Soomaaliya.
Waxaa ay sheegtay IMF in loo gudbi doono qeybta labaad ee Barnaamjika SMP si loo sii wado qorshaha Deynta Cafinta Soomaaliya.
“Kadib wada hadalo wax ku ool ah, kooxda IMF iyo Mas’uuliyiinta Soomaaliya waxay gaareen heshiis heer-shaqaale ah oo ku saabsan dhammaystirka dib-u-eegista koowaad ee SMP. Heshiiskan waxaa ansixinaya oggolaanshaha maamulka IMF” ayaa lagu yiri War kasoo baxay IMF.
“Kobcinta Dhaqaalaha waxaa la saadaalinayaa in uu si xasiloon u deganaan doono 2.9 boqolkiiba sanadka 2019-ka. Sicir-bararka ayaa la saadaalinayaa in uu si ku-meel-gaadh ah u kordho illaa 4.0 boqolkiiba sanadka 2019-ka, sababtoo ah sicirka cuntada oo aad u sarreeya dartood roobka oo xumaaday horaantii sanadkan” ayaa sidoo kale lagu xusay Warbixinta.
Shir looga hadlayey Arrimaha Dastuurka oo ka furmay Baydhabo